အောင်မြင်သော PMO Quit တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်း - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
PMO Quit တစ်အောင်မြင်သောမှာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးချန့်စ
အတော်လေး PMO အပေါ်မှာငါ့ဒဿန (ချည်ရန်လင့်ခ်)
ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအများစုသည်ဆေးစွဲခြင်းကိုဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအအေးတူရကီဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဒီဆယ်ကျော်သက် ၂ နှစ် (တစ်နေ့ ၂-၃ ဗူး) ဆေးလိပ်ကိုနီကိုတင်းဆေးလိပ်ဖြတ်တာကနေထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ပြီး "အခြား puff ယူဘယ်တော့မှ" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပြု
စာရင်းအင်းအောင်မြင်သောနီကိုတင်း၏ 90% quitters ယင်းကိုအသုံးပြုသည်ဟုဆို အေးတူရကီ နည်းလမ်း။ ပေါင်းစပ်ထားသောအခြားနည်းစနစ်များ (patch, gum, hypnosis, မူးယစ်ဆေးဝါး, တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရေးစသည်) သည်အောင်မြင်သော quitters ၁၀% သာရှိသည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ကြော်ငြာနှင့်သုတေသနအတွက်ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ဤအချက်အလက်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသလော။ ကြက်ဆင်အအေးသည်အလုပ်လုပ်သည်။ အခြားနည်းစနစ်အများစုသည်ကျပန်းဖြစ်နိုင်ချေသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းကိုသာရရှိသည်။ သို့သော်သွားဖုံးနှင့် patch ကြော်ငြာများသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး“ ပျော့ပျောင်းသော” တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်“ ၇၂ နာရီပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခြင်း” ကိုကြောက်သောသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်နီကိုတင်းသွားဖုံးကိုစွဲတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုစျေးကြီးတဲ့သွားဖုံးပေါ်မှာသုံးတယ်။ ဟားဟား၊ ဒါကအသုံးအများဆုံးရလဒ်ပါ၊ သင်ဟာနီကိုတင်းကိုစွဲနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အခုသင်ကြိုးစားပြီးတဲ့ငွေကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဆီသို့နီကိုဒင်းကိုပို့လိုက်သည်။
ဒီတော့ကောင်းမွန်တဲ့ COLD TURKEY နီကိုတင်း Quit ပရိုဂရမ်ကနေဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအခြေခံပြီး PMO ကိုအောင်မြင်စွာစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဟာအလားတူပုံစံမျိုးကိုငါထင်တယ်။ PMO အအေးကြက်ဆင်မှထွက်သောသူများ (အဘယ်သူမျှကြည့်ခြင်း၊ အနားမယူခြင်း၊ bikini ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြား“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းခြင်းပုံရိပ်များမသုံးခြင်း” စသည်) သည် ပိုမို၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ " ဗျူဟာများ။ အနှစ်သာရအားဖြင့် Cold Turko PMO Quitters သည် ၉: ၁ ကိုချဉ်းကပ်သောအချိုးအစားဖြင့်“ တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချခြင်း” နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအရအခြားနည်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အဆိုပြုသည်။
ဒါကဒီအဆင့်မှာသီအိုရီပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့အချက်အလက်မရှိဘူး။ ထို့အပြင် porn သည်အရသာများစွာရှိသည် (ယောက်ျားတစ် ဦး ၏ porn သည်အခြားယောက်ျားနှင့်မတူပါ။ ) မင်းကမင်းကိုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိမှသာဒါကိုသတိရပါ။ သူကပြောထားတာကဒီသီအိုရီဟာငါမှန်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတဲ့ဥပဒေတခုအပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်။ စွဲလမ်းမှု၏နိယာမ
ဒီဥပဒေကို PMO ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါအောက်ပါအတိုင်းဖတ်တယ်။ ညစ်ညမ်းမှုသည်ငါတို့၏မူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ဖွင့်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ porn အပေါ်မှီခိုမှုကိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ ”
ငါစီးကရက်ဆေးလိပ်ဖြတ်သောအခါ, ငါ "အခြား puff ယူဘယ်တော့မှ" ရန်ကတိပြု ဒီနေ့ PMO စွဲလမ်းမှုကနေငါပြန်ပြီး boot လုပ်နေချိန်မှာငါကဘယ်တော့မှမကြည့်နဲ့
52 ရက်အကြာကငါသွား၏ အေးတူရကီ porn ကိုချွတ်, ငါသည်အညစ်ညမ်းတစ် relapse ဆိုလိုပေသည်ဘယ်အရာကို (ငါ၏အနီကိုတင်းစွဲလမ်းအတွေ့အကြုံကနေ) သိနားလည်ကြ၏။ ငါမဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့ porn ဆို relapse, ငါ့စွဲလမ်းကြောင်း re-ပြဋ္ဌာန်းရန်နှင့်ငါ့ Re-Boot တက်နှေးကွေးလိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်။ အေးကြက်ဆင်သွားကတည်းက, ငါ့ Re-Boot တက်၏မြန်နှုန်းအလွန်မြန်ဆန်စွာရွေ့လျားနေပါသည်! PE သွေးဆောင်ငါ၏အညစ်ညမ်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရဖို့ပေါ်လာသည်နှင့်ငါ့အသက်ကိုအစဉ်အဆက်ထက် သာ. ကောင်း၏။ အကြှနျုပျ၏စိတျကိုချွန်ထက်သည်နှင့်ငါ၏အကြံအစည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါ porn အသုံးပြုသောသို့မဟုတ် masturbated နှင့်အစဉ်အမြဲငါနောက်တဖန် porn သုံးစွဲဖို့ဆန္ဒလုံးဝမရှိပေကြပြီမဟုတ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဤကတိ။
သင်တစ်ဦး9အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်တဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းကငျြတယျဆိုရငျ: အသစ္စာဂတိကိုယူပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ကတိပေးထက်အခြားနည်းလမ်းများကျော် 1 အချိုး,